बुधवार, अगस्त 18, 2021 बुधबार, अक्टोबर 13, 2021 Douglas Karr
एक राम्रो साथी क्रिस रीडले मलाई सोध्नुभयो कि मैले दिएँ क्यानभा एक प्रयास र उसले मलाई भन्यो कि मँ यो माया गर्छु। उहाँ बिल्कुल सही हुनुहुन्छ ... मैले केहि घण्टा को लागी यो परीक्षण गरीयो र साँच्चै पेशेवर डिजाइनहरु संग म प्रभावित भएको थिएँ कि म केहि मिनेट भित्र बनाउन को लागी सक्षम थिए!
म इलस्ट्रेटरको ठूलो प्रशंसक हुँ र धेरै वर्षदेखि यसलाई प्रयोग गरिरहेको छु - तर म डिजाईन-चुनौती भएको छु। मँ विश्वास गर्दछु कि म यो राम्रो डिजाइन जान्दछु जब म यो देख्छु, तर मेरो विचारहरु लाई वास्तविकतामा ल्याउन प्रायः मलाई गाह्रो हुन्छ। यो एक कारण यो हो कि किन म मेरो डिजाइन साझेदारहरूलाई यति धेरै माया गर्छु - तिनीहरू सुन्न र मलाई के सोचिरहेका छन् उत्पादन गर्न मास्टर छन्। यो जादुई छ। तर म उत्खनन गर्छु।
भन्दा ठोस भन्दा एक खाली पृष्ठसँगै सुरु गर्नुहोस् प्लेटफर्महरू जहाँ म प्रायः खाली हेर्छु वा विचारहरूको लागि इन्टरनेट ब्राउज गर्छु, क्यानभा तपाईंलाई एक फरक डिजाइन र प्रेरणा प्रक्रियाको माध्यमबाट लैजान्छ जुन ज्ञानवर्धक हो। क्यानभा खाली पृष्ठ हटाउँछ र तपाइँको अर्को डिजाइन लागू गर्न विचारहरु को एक टन संग प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ एक साइजिंग चार्ट हेर्न को लागी कुनै आवश्यकता छैन, उनीहरु एक पोडकास्ट कभर, सामाजिक मिडिया छविहरु, प्रस्तुतीकरण, पोस्टर, फेसबुक कभर, फेसबुक विज्ञापन छवि, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक अनुप्रयोग छवि, ब्लग ग्राफिक, कागजात, कार्ड, ट्विटर पोस्ट संग पूर्व कन्फिगर आउँछ। निमन्त्रणा, व्यापार कार्ड, ट्विटर हेडर, Pinterest पोस्ट, घर जग्गा उडान, Google+ कभर, किन्डल कभर, र फोटो कोलाज। तिनीहरूको लेआउट मा शामिल केहि महान इन्फोग्राफिक तत्वहरु पनि छन्!
क्यानभा संग शुरू गर्नुहोस्
खुलासा: म मेरो प्रयोग गर्दैछु क्यानभा यस लेखमा सम्बद्ध लिंक।